Tattoo Tips ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Tattoo Tips Factory
ထူးခြားချက်များ - ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီးပါးလွှာသောပိုသိုလှောင်မှု။ ၁။ အပ်ထိပ်ဖျားသည်စတုဂံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်အပ်ကိုကြည့်ရှုရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ 2. ဆန်းသစ်တီထွင်သောကွေးဆင်ခြေလျှောဒီဇိုင်း, ပိုမိုမှင်သိုလှောင်မှုနှင့်ချောမွေ့; ၃။ ပါးစပ်၏ဘေးနံရံသည်အလွန်ပါးလွှာသောကြောင့်အပ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်နေရာလွတ်မပေးနိုင်ပါ။ Tattoo needles များအတွက် needle nozzle များရွေးချယ်ရန်သိကောင်းစရာများ - round needles (RL, RS) R needle nozzle များတပ်ဆင်ထားပြီး pin headers (F, M1, M2, RM) F needle nozzle များတပ်ဆင်ထားသည်။ တီ ...
ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း - အရည်အသွေးမြင့် PE ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်အရောင် - အဖြူနှင့်ပွင့်လင်းကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် - ၁၀၀ ဂရမ် / အကွက်ခန့်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် - သေတ္တာ ၁၀၀ သေတ္တာ၊ ၅၀ သေတ္တာတစ်လုံး၊ блистерထုပ်ပိုးခြင်း၊ သန့်ရှင်းပြီးတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု၊ ယခုတွင် ၃၀ ခုရွေးချယ်ရန်အကြံပြုချက်များ Tattoo needles အတွက် needle nozzle များရွေးချယ်ရန် - ပတ် ၀ န်းကျင်အပ် (RL, RS) သည် R နှင့် D needle nozzles များနှင့် pin headers (F, M1, M2, RM) F needle nozzle များတပ်ဆင်ထားသည်။ သူတို့တွင် M2 သည်အတန်းနှစ်မျိုးဖြစ်ပြီးကိုက်ညီသောအပ်တံဆိပျမှာ hal ဖြစ်သည်။
အရွယ်အစား: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D-9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F-9F-11F-13F-15F- 17F ကြိုတင်ပိုးမွှားတိုတိုဖယ်ရှားနိုင်သော Tattoo သိကောင်းစရာများပစ္စည်း - အရည်အသွေးမြင့်မားသောပလပ်စတစ်။ သူတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူ။ အဆင်ပြေသည်။ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးတာကသင့်ကိုဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမှကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအသွင်အပြင်၊ လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူခြင်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ 3. ကျန်းမာသန်စွမ်း, ဘေးကင်းလုံခြုံ, ချော် 4.Competitive စျေးနှုန်း; ၅။ ခံစားမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှု ...
ရောင်းချသောအရွယ်အစား: BOX အမျိုးအစား: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D-9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F-9F-11F -13F-15F-17F အရည်အသွေးမြင့်သော PVC hard plastic သည် EO ဓာတ်ငွေ့ဖြင့်ကြိုတင်ပိုးမွှားခြင်းကိုကြိုတင်မွှေနှောက်နိုင်သည့်ဆေးတစ်မျိုးတည်းရှိသည့်တက်တူးများအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ တိတိကျကျခံနိုင်သည့်အရွယ်အစားအရှည် - ၅၀ မီလီမီတာကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Hurricane တစ်ခါသုံးတက်တူးထိုးသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်ရှိပလတ်စတစ်၊ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအစွန်အဖျားသည်အပ်ချောချောမွေ့မွေ့ကိုကောင်းမွန်စွာမင်စီးဆင်းစေသည်။ ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့်အရောင်အိုင်ဒီအတွက် ...
တက်တူးဆေးထိုးအပ်အတွက် ၁၀၈mm မီလီမီတာအကာအကွယ်ပေးထားသောသိကောင်းစရာများ။
အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးတက်တူးထိုးနည်းများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မြုံပြီးအန္တရာယ်ကင်းသည့်ဆေးမင်ကြောင်ထိုးနည်းများ အရည်အသွေးမြင့်ပြီးသာလွန်မြင့်မားသောတစ်တောင့်ခံနိုင်သောသိကောင်းစရာများ Tattoo သိကောင်းစရာများတက်တူးထိုးအပ်ထိုးဆေးအတွက်ရှည်လျားသောအကြံပြုချက်များကုန်ပစ္စည်းအမည်: Disposable ရှင်းလင်းသော Tattoo သိကောင်းစရာများရရှိနိုင်သောအရွယ်အစား: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D- 9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F-9F-11F-13F-15F ** 5M-7M-9M-11M-13M-15M Model နံပါတ်: ZZ-010 ထုပ်ပိုးမှု: 50Pc / box MOQ: 10 Boxes အရည်အသွေး: 1st Class ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Tattoo သိကောင်းစရာများပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးမှု - ၅၀pcs / box၊ တစ် ဦး ချင်းစီအတွက် ...
ရိုးရာတက်တူးထိုးတံများအတွက် ၁၀၈ မီလီမီတာအကွာအဝေးအမျိုးမျိုးခွဲထားသောသိကောင်းစရာများ။
၁၀၈ မီလီမီတာအနက်ရောင်ဖယ်ရှားနိုင်သောတက်တူးထိုးနိုင်သည့်အချက်များကိုင်တွယ်ရန်ရပ်တန့်နိုင်သောရရှိနိုင်သည့်အရွယ်အစား - ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D-9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F -9F-11F-13F-15F R: rounder liner & shader needles အတွက်အသုံးပြုသည်။ F: ပြားချပ်ချပ်နှင့် magnum အပ်များတွင်အသုံးပြုခြင်း D: စိန်တိုင်များကိုအဝိုင်းသို့မဟုတ် shader တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မှင်စီးဆင်းမှုအတွက် groove ပေးစဉ်အစွန်အဖျားအပ်လှုပ်ရှားမှုဆန့်ကျင်ပိုပြီးထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ မိတ်ဆက်: BOX OF 50 ရောင်းချခဲ့သည်အရည်အသွေးမြင့်မား ...